Ogaden News Agency (ONA) – Sawiro kamid ah Shirkii Xuquuqul insaanka ee ka dhacay London
Sawiro kamid ah Shirkii Xuquuqul insaanka ee ka dhacay London
Magaalada London waxaa lagu qabtay shir ay soo qaban qaabisay jaaliyada Ogadeniya ee London oo ay isbahaysanayaan Jaaliyadaha Oromada, Beenshanguul, Oromada, Gambella, iyo Qowmiyadaha kale ee Ethiopia gumeysigeeda ku hoos nool. waxaana jaaliyad kasta ay soo bandhigtay tacadiyada iyo xasuuqa dhulkooda ka jira ee ciidamada Woyanaha Taliska Ethiopia kulakacaan.
Shirkan ayaa u jeedadiisu aheyd sidii tacadiyadaaas loo arruurin lahaa looguna gudbin lahaa Beesha caalamka oo dhaqaale badan iyagu siiya Wadanka Ethiopia. Waxaa hadaba shirkan hoosta looga xariiqay in xoog badan la saaro sidii Ogadeniya looga xoreyn lahaa gumeysiga Ethiopia islamarkaasna xoog badan loo galin lahaa sidii la isu bahaysan lahaa loona soo saari lahaa dhibaatooyinka xuquuqul insaan ee ka jira guud ahaanba deeganada Oromada, Gambellaha, Sidamaha, iyo qowmiyadaha kale sida Sheko iyo Ethiopiada kaleba.
Shirkan waxaa hoosta looga xariiqay in siwada jira hada kadib jaaliyadahaas dibada uga wada howlgalaan wadamada ree galbeedka. Hal cod oo isku mid ahna ay kula hadlaan beesha caalamka iyo wadamada ree galbeedka. Gudaha wadankiina ay gaashaanbuur midaysan oo wada howlgasha ka hirgaliyaan. Si loo helo guulo dag dag ah waa in xoogeena oo dhan aynu mideyna ayay dhaheen asxaabti isugu timid shirkani.
Shirkan waxaa kasoo qeyb galay Suxufiyiin iyo marti sharaf. Waxaa kamid aha Martidi hadlkoodu isoo jiitay nin kasocday wadamada Karibianka (Caribean) oo aad uga hadlay dhibaatada ay leedahay gumeysiga iyo midab takoorku. isaga oo tusaale badan ka bixiyay sida ugu dhib yar (Wadada ugu haboon) ee looga bixi karo waxa uuna ku tilmaamay in la iskaashado oo qadiyadan laga dhigo mid heer caalami ah. Waqtigan hada la joogo qofina kaligiis waxba ma qaban karo waa in heer caalami la isu kaashado aniguna diyaar baan u ahay ayuu yiri inaan ka qeyb qaato sidii qadiyada Ogaden loo gaadhsiin lahaa heer caalami.
Filimaan/ Sawiraan iyo Warbixin dib ka filo.